Abazali abakhathalelayo ukwazi ukuthi izingane kudingeka abe ngaphandle. Le nkinga esiphuthumayo kakhulu, ngoba izingane cishe benqaba ukuhamba ngezizathu ukuthi babesebunzimeni egcekeni nge ngalutho. Futhi mhlawumbe baqinisile? Phela, akukho ngisho ebaleni lokudlala evamile, lapho izingane kungaba ukudlala ngokuphepha ngaphandle kokwesaba izimoto amabhayisikili.
Ubani nje omunye ngaphandle kodwa abazali kufanele ukuxazulula inkinga zokudlala zezingane?
Izandla bazokwazi ukwenza ngcono kakhulu futhi kuwusizo kakhudlwana, futhi okubaluleke kakhulu, ngeke nazo zonke izifiso guys egcekeni. Ukuze uqale nge ukuhlanzwa kanye kwakuzosuswa ensimini engaphansi pad. Uyavuma ukwenza imali eningi akudingekile, kodwa ingenye izigaba okhandlayo yibona ababenza umsebenzi omningi. Into esemqoka - ukuze uqale kuhlomisa lokudlala ngezandla zakhe nezinto ngakwesokunene kungaba ukwazi wakhe sihle futhi ezingcono. Yakha nonke ngeke izingane zabo siqu.
Bangaki imibono ungacabanga I-zokudlala zezingane? ngezandla zabo, uzodala wangempela inganekwane izingane. Nalabo asebekhulile, ujabulile iqhaza kule nqubo. Ngokwesibonelo, liyakwazi ingadi, ukupenda, ucingo futhi wenze ezinye izakhi okulula isayithi.
Awu eshukumisa amadizayini lokudlala. Izandla wenza kube ngokwezifiso. Ngokwesibonelo (ngaphandle senhliziyo evamile futhi Sandbox), kungenzeka ukuhlomisa izindlu yezingane, lapho malyshnya bayokujabulela ukudlala amadodakazi nonina, esitolo nokunye.
Kusukela izingodo abavamile ungakwazi ukwakha Gazebo obuhle itafula izingane amadala, kanye amabhentshi endaweni esitimela for the kids. Futhi kungani, empeleni, sandpit kumelwe nakanjani babe isikwele noma unxande? Kumnandi kakhulu ukudlala ke, uma kuwukuthi uhlobo imoto, engiyishoyo noma endizeni.
Kungekho masondo amadala ezimoto lingakhiwa izintuba ezihlukahlukene hhayi kuphela, kodwa lonke zoo - kusukela amaxoxo ukuze indlulamitsi.
amabhodlela epulasitiki, futhi, nakuba bengeke bame kokungenzi lutho: nje kancane, futhi ingasetshenziswa njengendlela umngcele multi anemibala. Futhi lokho imbali embhedeni omuhle ongazifunda kubo! amabhodlela epulasitiki Ojwayelekile amavolumu ahlukahlukene axhunyiwe nomunye ukuze enze hhayi kuphela izindlovu penguins igundane, kodwa futhi wonke izigodlo. Yiqiniso, akuzona njengoba eliqinile le njengoba yezandla ezenziwe ngokhuni, kodwa amabutho izingane zabo ukuba zizenzele bebodwa.
Yeka ukuthi kungaba kuhle ukubheka mushroom edlelweni, ohlomile iziphunzi ubudala noma imishayo yokhuni! Hhayi egcekeni, azilona iqiniso! Kuleli sayithi wafika ukudlala guys okungaka kusukela ezindlini ezingomakhelwane, ngisho ezivela ezindaweni ezingomakhelwane.
Kungani abazali ambalwa ngakho Uzindla kuhlomisa zokudlala zezingane ngezandla zabo? Ngempela abanandaba lapho bedlala nezingane zabo? Ngemva nje kwezinsuku ezimbalwa, uma uzama, ungakwazi ukwakha umdlalo eziyinkimbinkimbi, echithe isikhathi ubuncane imali.
Ngicabanga uma abadala jenduka kwezinsuku ezimbalwa lapho ngisemncane futhi kube khona izingane zabo egcekeni kungaba zokudlala nokunye okuningi. zingabantu izandla zabo Wakhe indawo imidlalo, okuyinto, ngeshwa, akakwazi ukuthenga izingane.
Indlela yokwenza ukugoqa ushokoledi umzimba ekhaya
Ibhayisikili Electric ngezandla zakhe imizuzu 30. okuzenzela ibhayisikili kagesi
"Inkomo ka Korenovki" ice cream: Ukwakheka, ikhalori, izibuyekezo, izithombe
Aerosol - a ... Izinhlobo, ukusetshenziswa aerosols
NgesiSumerian inyanga unkulunkulu. Inyanga unkulunkulu kwabaseGibhithe
Ukusebenza igesi ngaphansi isobaric, isothermal nezinqubo adiabatic